Nkedo anwụ bụ usoro maka ngwaahịa na akụrụngwa igwe na-emepụta oke. Nhazi ebu bụ otu n'ime usoro kachasị mkpa na usoro ahụ n'ihi na ọdịdị na àgwà nke ihe ọkpụkpụ ahụ ga-emetụta kpọmkwem ngwaahịa ikpeazụ. Usoro nkedo anwụ na-amanye ọla a wụrụ awụ ka ọ bụrụ ihe eji eji nnukwu pịa...
Ọmụmaatụ mbụ nke ịnwụ nkedo site na ntụtụ nrụgide – na-emegide nkedo site na ike ndọda – mere n'etiti 1800s. Enyere Sturges patent na 1849 maka igwe mbụ ejiri aka rụọ maka ụdị mbipụta nkedo. Usoro a bụ naanị ụdị ngwa nbipute maka 20 na-esote ...
Nkedo nkedo bụ ụzọ dị mfe, dị ọnụ ala yana ọtụtụ ụzọ isi mepụta aluminom n'ime ụdị ngwaahịa dị iche iche. Ihe ndị dị ka nnyefe ike na injin ụgbọ ala na okpu n'elu ihe ncheta Washington bụ ihe niile sitere na usoro nkedo aluminum. Ọtụtụ ihe nkedo, ọkachasị nnukwu alumini...
• Automotive • Aluminom na-ewu ụgbọ ala ka mma. Ojiji aluminom na-eji ụgbọ ala na ụgbọ ala azụmahịa na-eme ngwa ngwa n'ihi na ọ na-enye ụzọ kachasị ngwa ngwa, nke dị nchebe, nke kachasị mma na gburugburu ebe obibi na ọnụ ahịa bara uru iji mee ka arụmọrụ dịkwuo elu, kwalite akụ na ụba mmanụ ọkụ na ibelata ikuku. Aluminom njikọ ...
Nkedo anwụ bụ usoro na-arụ ọrụ nke ọma, nke akụ na ụba na-enye ụdịdị na akụrụngwa sara mbara karịa usoro nrụpụta ọ bụla ọzọ. Akụkụ nwere ogologo ndụ ọrụ yana enwere ike ịmebe ya iji mejupụta mmasị anya nke akụkụ gbara ya gburugburu. Ndị na-emepụta ihe nwere ike nweta ọtụtụ uru na uru ...
site admin na 20-02-23
Yomato pressure die nkedo igwe na-ebu na nkwakọ ngwaahịa, kposasịrị ACC cylinder wee kpokọta ya nke ọma. Igwe ihe nkedo Yomato na-edozi nke ọma n'ime akpa, iji zere mmebi ọ bụla n'oge njem. ...
Ihe ngosi azụmaahịa Yomato Pressure anwụ nkedo igwe.
Igwe ihe nkedo Yomata na-esonyere ọtụtụ ihe ngosi & ihe ngosi azụmaahịa kwa afọ, wee weta ihe ngosi ...
Igwe ihe nkedo Yomato anwụ sonyere na MetalAP 2019.
site admin na 19-12-26
Igwe ihe nkedo Yomata anwụ sonyere na MetalAP 2019, BITEC, Bangkok, Thailand.
Ezi afọ ọhụrụ 2020.
TO: Ezigbo ndị ahịa na onye mmekọ: AFỌ ỌHỤRỤ 2020! Ekele dịrị gị na ezinụlọ gị. SITE: Igwe ihe nkedo anwụ anwụ YOMATO.
Yomato Teamwork na MMTS 2019 na Chennai India.
site admin na 19-12-21
Igwe ihe nkedo Yomato nwụrụ anwụ Teamwork na MMTS 2019 na Chennai India. Ọ dịghị ihe ọla edo nwere ike ịnọrọ! Obi dị anyị ụtọ izute ezigbo ndị enyi ochie na ndị enyi ọhụrụ si nnukwu India. Nọgidenụ na-aga n'ihu, ndị otu Yomato mmasị anyị, Gaba n'ihu, nye gị ihe ngwọta kachasị mma maka nkedo ọnwụ gị ...